Lathe Machine Intshayelelo: Iindidi ezili-16 zoMatshini oLathe-TSINFA
I-Lathe sesinye sezixhobo zomatshini ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokulungisa isinyithi. Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo zomatshini. Kunzima kubantu abangalaziyo eli shishini ukuba bacacise umahluko phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zezixhobo zomatshini. Kweli phepha, sihlela ukusuka kwi-sub-system ezi-6: imowudi yolawulo, ulwakhiwo lomatshini, ukusetyenziswa, izinto zokwenza imveliso, inani labaphethe izixhobo, uhlobo lweenxalenye zomatshini. Nangona iintlobo ezahlukeneyo amagama lathe, kukho iimeko umnqamlezo, ezifana umatshini umsantsa ebhedini lathe nayo lathe tyaba, umbhobho intambo lathe nayo iyeUmatshini wentsimbi ye-CNC, kodwa ayichaphazeli ukuqonda kwethu i-lathe.
Iindidi umatshini lathe intshayelelo:
Indawo yokulala ebhedayo
I-crankshaft lathe, i-camshaft lathe, i-wheel lathe, i-axle lathe, i-lathe ye-lathe kunye ne-ingot lathe, ukujika kunye nesixhobo somatshini wokugaya, i-wheelet lathe, i-pipe yentsimbi
I-lathe yokusika isinyithi
Ihlelwe ngenani labanini bezixhobo
Isixhobo esisodwa se-CNC lathe, i-CNC ene-lathe
Ihlelwe ngohlobo olusisiseko lwamacandelo omatshini
Uhlobo Chuck CNC lathe, phezulu lathe CNC
Okwangoku, zimbini iindlela zolawulo lwe-lathe, enye kukulawulwa ngesandla, kwaye enye kukulawulwa kweenkqubo ze-CNC. Ngokweendlela ezahlukeneyo zolawulo, i-lathe yahlulahlulwe yangamatye aqhelekileyo kunye ne-CNC lathe.
I-lathe ngokubanzi inento ebanzi yokuqhubekeka, uhlengahlengiso lwesantya sokujikeleza kokujikeleza kunye nenani lokutya likhulu. Imigangatho yangaphakathi neyangaphandle, ubuso bokugqibela, kunye nemisonto yangaphakathi nangaphandle yomsebenzi ingacutshungulwa. Olu hlobo lwe lathe luqhutywa ikakhulu ngesandla ngumsebenzi. Kulula ukusebenza. Kwinqanaba lokuqala, isantya sihlengahlengiswa, izixhobo ziyahanjiswa, i-lever yokuqala iyaphakanyiswa, emva koko i-joystick ityhalelwe phambili. Isixhobo sokujika siqhubela phambili, ukutsala ngasemva, isixhobo sokujika sibalekela ngasekhohlo, kwaye isixhobo sokujika siya ngasekhohlo. Ekhohlo nasekunene ziyafana. Nangona ukusebenza kwesithuthi ngokubanzi kulula, ukuqhubekeka kwamalungu ngumsebenzi wobugcisa, kwaye abasebenzi baya kujonga izixhobo zokulinganisa kunye nemizobo yokuqhutywa. Xa kusetyenzwa iibhetshi ezincinci zamalungu, ii-lathes eziqhelekileyo zinenzuzo enkulu kune-CNCumatshini lathe. Amaxesha amaninzi lathes jikelele-njongo ziye zalungiswa, kunye lathes CNC zisekwinqanaba kweenkqubo. Ngenxa yolu phawu, i-lathe yesiqhelo isenayo imarike, elungele isiqwenga esinye, imveliso encinci yebatch kunye nokugcinwa kweeworkshops.
Ezi ndawo zinokwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwa zibe ziindidi zemixokelelwano yesiqhelo yeenkcukacha ezahlukeneyo, ezinje nge-LT6232 kunye ne-LT6250, kuxhomekeke kubude beziko kunye nomgama osembindini. Ukongeza ekuguqulweni kwazo zonke iintlobo zemisebenzi ejikelezayo, zinokujika imisonto eyahlukeneyo, enjengomsonto weetriki, intambo ye-intshi, umsonto we-modulus, umsonto we-diametric kunye nomsonto wokuphela.
Ukuze kuphuculwe ububanzi bokuqhubekiswa kwesikhuselo esiqhelekileyo, kuye kwafunyanwa umsantsa okhulelweyo webhedi (ekwabizwa ngokuba yi-saddle lathe).
Isiphelo sasekhohlo sebhedi yesikhewu ngaphambili kwebhokisi yentloko sitshile kwaye sinakho ukulungiselela iindawo ezinkulu zobubanzi. Ubume be-lathe buneentloko ezimbini eziphakamileyo, buphakathi embindini, kwaye bukhangeleka ngathi sisihlalo, ke oko kubizwa ngokuba sisihlalo sesali. I lathe isihlalo ilungele machining izahlulo kunye nemilinganiselo ezinkulu emaphandleni kunye nemilinganiselo yezihlunu ezincinane. Kukulungele ukuguqula isangqa esingaphandle, umngxunya wangaphakathi, ubuso bokugqibela, islot kunye neetriki, intshi, imodyuli, intambo yokuluka, kunye nokubhola kunye nokudika. , reaming kunye nezinye iinkqubo, ngakumbi ezifanelekileyo iqhekeza elinye, amashishini emveliso yebhetshi. I-lathe yesali inokuqhubekeka ngobungakanani bemisebenzi emikhulu kwindawo yesihlalo. Izikhokelo zesixhobo somatshini ziqinisiwe kwaye zicolekile ukuba zisebenze ngokulula nangokuthembekileyo. I-lathe ineempawu zamandla aphezulu, isantya esiphezulu, ukuqina okuqinileyo, ukuchaneka okuphezulu kunye nengxolo ephantsi.
I-lathe ye-CNC iphuhlisiwe ukusuka kwi-lathe, kwaye inkqubo yolawulo lwenkqubo yongezwa kumatshini ophambili. Inkqubo ilawulwa yinkqubo yokulawula umatshini ukuba wenze lo msebenzi ngokungqinelana nenkqubo echaziweyo, ugqibe umjikelo wayo yonke inkqubo yoomatshini.
Njengama-lathes aqhelekileyo, ii-lathes ze-CNC zikwasetyenziselwa ukuhambisa umphezulu ojikelezayo wamalungu. Ngokubanzi, inokugqibezela ukugqitywa komphezulu wangaphandle we-cylindrical, umphezulu we-conical, umphezulu wokujikeleza kunye nomsonto, kwaye inokuqhubekeka nokwenza imiphezulu ejikelezayo, njengee-hyperboloids. Izinto zokusebenza ze-lathe kunye ne-lathe eziqhelekileyo zifakwe ngendlela efanayo. Ukuphucula ukusebenza ngokuqhubekekayo, i-hydraulic lathes ubukhulu becala yi-hydraulic, i-pneumatic kunye ne-chucks zombane.
Ubume be-lathe ye-CNC bufana ne-lathe eqhelekileyo, oko kukuthi, iqukethe ibhedi, i-headstock, i-holder yesixhobo, inkqubo yoxinzelelo lwenkqubo yokutya, inkqubo yokupholisa kunye ne-lubrication. Inkqubo yokondla ye lathe CNC ngokomgangatho eyahlukileyo lathe yesiqhelo. I-lathe yesiqhelo inebhokisi yokutya kunye nomphathi wotshintshiselwano. I-lathe ye-CNC isebenzisa ngqo i-servo motor ukuqhuba isilayidi kunye nesiphatho sesixhobo ngokusebenzisa ibhola esijijwayo ukuze siqonde intshukumo yesondlo. Ubume benkqubo feed lula kakhulu.
Ii-lathes zanamhlanje ze-CNC sele zidumile kulawulo lwe-microcomputer. Okwangoku kukho iindidi ezimbini ze-CNC lathes, enye yazo sisixhobo somatshini esilawulwa yi-microcomputer, kwaye esinye sisixhobo somatshini esilawulwa yikhompyuter. Ngexesha lokusebenza, i-lathe ye-CNC yenza ubalo ngokungqinelana nemiyalelo yenkqubo yegalelo kwaye igalelo iziphumo zokubala kwiyunithi yokuqhuba. Isixhobo sokulawula ukuqhuba senza ukubala ngokomyalelo, sisebenzisa iziphumo zokubala kwisixhobo sokuqhuba, silawula isixhobo sokuqhuba (istepper motor) embindini wesixhobo sokuqhuba ukuqhuba isixhobo sokuhambisa umatshini, kwaye sisebenza inyathelo lokusebenza komatshini Isixhobo (ukuthuthwa okude kunye nokuthe tye) ukuqonda intshukumo yokusika.
Olona phawu lubalulekileyo lwe-lathe ethe tyaba kukuba i-axis ephambili iyafana nebhentshi kwaye ijongeka ngathi ilele emhlabeni. Amatheyiphu oxwesileyo afanelekileyo ekuqhubekekeni izinto ezisebenza ngokukhaphukhaphu ezingabububanzi obukhulu kodwa zide. Kungenxa yokuba i-lathe ethe tyaba iqhutywa yintsimbi kunye nomphezulu ngokuchasene nomsebenzi. Esi sakhiwo simisela ukuba ubunzima bomsebenzi abunakuba bukhulu kakhulu. Umthwalo oqhelekileyo ophezulu ngowama-300 kg, kwaye umthwalo onzima unokuthwala itoni enye. Ubude bokusebenza yeyona nto iphambili kwilathisi ethe tyaba xa kuthelekiswa nelothe ethe nkqo.
Ubude bokusebenza yi-750mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm okanye i-8000mm, njl.
Olona phawu lubalulekileyo lwe-lathe ethe nkqo kukuba isixhobo sokuluka sijikeleze itafile kwaye indawo yokusebenza ibambekile etafileni. Le lathe nkqo kufanelekile ukuba kusetyenzwa workpieces enzima enobubanzi enkulu ubude elifutshane. Kungenxa yokuba kwi-lathe ethe nkqo, ukubotshwa kunye nokulungelelaniswa kwamalungu kufanelekile, kwaye isikhokelo esijikelezayo phakathi kokusebenza kunye nesiseko sinokuthwala okungcono. Ukutyibilika kwentshukumo ngexesha lomsebenzi kuphezulu, ke umgangatho wokuqhubekeka kwamalungu uphezulu, kodwa umgangatho wamacandelo kunzima ukuwuqinisekisa xa ubekwe kwimingxunya yesiqhelo kunye nasekupheleni.
I-lathes ezi-nkqo zingahlulwa zibe ziikholamu ezime nkqo zekholamu enye kunye neekholamu ezizezimbini ezime nkqo. Ikholamu ethe nkqo ethe nkqo ngokubanzi inezixhobo ezime nkqo kunye nesiphatho secala esisecaleni. Bobabini abanini baneebhokisi zokutya ezahlukileyo ezinokuqhutywa ngokukodwa okanye ngaxeshanye ngokudlula ngokuthe nkqo nangokuthe tye. Lathes ezinkulu nkqo ngokubanzi babe uprights ezimbini. Ukulungiselela ukucwangciswa, ikholamu emibini ethe nkqo ngokubanzi inezixhobo ezibini ezithe nkqo kunye nesiphatho esinye secala. Iphosta enkulu enkulu inesiphatho semela ecaleni kwicala ngalinye kula mabini.
Ulwakhiwo lomgaqo kaloliwe uvumela i-lathe ukuba ibe ngqongqo kwaye kube lula ukususa iichips.
I-crankshaft lathes, i-lathes lathes, i-roll lathes kunye ne-ingot lathes, ukujika kunye nokugaya izixhobo zomatshini, i-lathe ye-lathes lathes.
I-Crankshaft lathe luhlobo olukhethekileyo lwentambo esetyenziselwa ukwenza umatshini wentambo yokuqhagamshela kunye necala le-crank yengalo ye-injini yokutsha yangaphakathi kunye ne-air compressor crankshaft.
I-lathe yevili le-CNC
I-lathe yevili ye-CNC sisixhobo esikhethekileyo somatshini sokulungisa kunye nokulungisa izibini zamavili oomatshini kaloliwe. Ukuze kuphuculwe intsebenzo kunye nexabiso lentengo yesixhobo somatshini, inkqubo ye-CNC yesiphatho sesixhobo esine-lathe yevili yaphuhliswa, kunye nomlinganiso wokuzenzekelayo, ukuseta isixhobo kunye nemisebenzi yokusika kwezoqoqosho yenkqubo ye-CNC kwaxoxwa ngayo. Yindlela yokusebenza koomatshini oluzenzekelayo ngokupheleleyo, kwaye ixhotyiswe ngenkqubo yokulinganisa ngokuzenzekelayo, ethi ibala ngokuzenzekelayo iiparameter zokusika emva kokulinganisa umphezulu wokunyathela kwevili eliza kulungiswa.
I-lathes yokuqengqeleka zizinto ezenzelwe ukuqhuba ii-rolls. Imiqulu ngokubanzi yimigca esetyenziswa kumatshini wokugaya. Ubukhulu obukhulu, obunzima kunye nobunzima be-cylindrical shape kunye ne-grooves kuyo.
Ukuvula nokugaya umatshini
Ukujika kunyeumshini wokugaya iphelaisixhobo machining edityanisiweyo yenye yeenkqubo machining uthandwa kakhulu ehlabathini machining. Itekhnoloji yokuvelisa phambili. Machining edityanisiweyo kukuphunyezwa kweenkqubo ezahlukeneyo machining kumatshini omnye. WokugayaUkubhola, Ukujika komatshini. Ukulungiswa kwezinto ezidityanisiweyo yeyona isetyenziswa kakhulu kwaye eyona inzima kukudityaniswa kokujika nokugaya. Ukujika nokugaya iziko machining edibeneyo ilingana indibanisela lathe CNC kunye neziko machining.
Pipe intambo lathe, eyaziwa ngokuba umbhobho intambo lathe, i lathe tyaba yenzelwe ukujika izixhobo ezinkulu-ubukhulu kumbhobho. Inomngxuma omkhulu wesingxobo (ikakhulu i-135mm okanye nangaphezulu) kunye ne-chuck ngaphambili nangasemva kwebhokisi yokuluka. Ukulungiselela ukubambelela kunye nokulungiswa kwezinto zokufaka umbhobho omkhulu okanye imivalo, imveliso isetyenziswa ngokubanzi kulungiso loomatshini bokuvelisa oomatshini, ipetroleum, imichiza, amalahle, ukuhlola umhlaba, ukuhambisa amanzi ezidolophini kunye nemizi-mveliso yokuhambisa amanzi.
Imoto yokusika isinyithi iyafana nemoto esebenza ngokhuni kuba isetyenziselwa ukusika indawo yokusebenza ngokujikeleza indawo yokusebenza ngokudibana nesixhobo.
Nangona kunjalo, umahluko phakathi kwezi zibini mkhulu:
Ubume besiphatho semela bohlukile. Iimoto zokusebenza ngokhuni ziyaguquguquka. Umzekelo, ukusebenzisa i-lathe yokusika isinyithi ukuqhuba i-vase, ukuhambisa isixhobo ukuyibumba kungangabinangxaki.
Uhlobo lwento yokusebenza yahlukile. Umsebenzi wesithuthi esisebenza ngesinyithi uhlala uhambelana, kwaye uxinano kunye nobulukhuni zihlala ngokufanayo, kungoko kunqunyulwa i-3mm ngexesha, kwaye isixhobo sinokuhamba ngokuzenzekelayo. Ukuba iinkuni zisetyenziswa ngale ndlela, iinkuni ziyacaphuka kwaye nomthi uyakrazulwa. Imoto yokusika isinyithi imoto ilunge ngakumbi.
Izixhobo zokujika zahlukile. Isixhobo esisikiweyo sokujika asifani nekona.
Uhlobo Chuck CNC lathes
Ezi lathes azinamthungo kwaye zilungele ukujika iidiski (kubandakanya imigodi emifutshane). Uninzi lweendlela zokubotshwa zombane okanye ulawulo lwe-hydraulic, kwaye ubume be-chuck bunemihlathi emininzi ehlengahlengiswayo okanye imihlathi engacimiyo (okt, imihlathi ethambileyo).
Ezi lathes zixhotyiswe ngomsila oqhelekileyo okanye i-CNC tailstock. Zilungele ukuguqula iindawo ezinde kunye neendawo zediski enobubanzi obuncinci.
Ukongeza, inokwahluka ngokokuchaneka kokuqhubekeka kwayo
I-lathe yahlulwe yangumgangatho oqhelekileyo, umatshini ochanekileyo kunye nomgangatho ophezulu wokuchaneka. Ukuchaneka kunye ne-lathes ephezulu yokuchaneka kuhlala kusekwe kwimilinganiselo yesiqhelo yokuchaneka. Ngokuphucula ukuchaneka kwejiyometri kumatshini, ukunciphisa ifuthe lokungcangcazela kunye nemithombo yobushushu, kunye nokusebenzisa iibheringi zokusebenza okuphezulu, umatshini unokuchaneka okuphezulu komatshini.
Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Nxibelelana neQela lethu leNkxaso